Daraasadaha suugaanta Ghostwriter Waxaan si dhakhso ah uga caawiyaa xirfadleyda waraaqaha
Daraasaadka suugaanta ee Ghostwriter
, 08: 07
Qorayaashayagu waxay ku leeyihiin khibrada lagama maarmaanka u ah barashada suugaanta
Barashada suugaanta waa daraasad caan ah. Sidaas darteed layaab ma ahan in buundooyinka wanaagsan ay hagaajiyaan fursadaha qofka ee suuqa shaqada. Ku gudubka wanaagsan ee dhammaan imtixaannada dhexe iyo qoraalka ugu dambeeya ayaa shuruudo wanaagsan u ah bilowga guuleysiga nolosha xirfadleyda. Waxaan ku faraxsanahay inaan kaa caawinno inaad ku gaarto hadafkan. Dalbo jetzt Shaqadaada aad laheyd khibradeena khibrada iyo khibrada leh iyo qorayaasheena waxay bilaabi doonaan shaqadaada waxbarasho isla markiiba. Hada qaado Kontakt nala soo xiriir si aan u socodsiino dalabkaaga oo aan u fidino caawimaad. Kaliya samee baaritaan bilaash ah oo ku saabsan taas xiriirka waxaanan toos kuugu soo diri doonnaa dalab. Caqli iyo qarsoodi ayaa aad muhiim noogu ah.
Barashada suugaanta waxaa loo qaybiyaa aagag kala duwan oo diiradda la saaro oo aad adigu arday ahaan dooran karto. Barashada daraasaadka suugaanta waxay ku saabsan tahay asalka suugaanta, isticmaalkeeda iyo soo dhaweynteeda. Cilmigaaga Shaqada guriga, shahaadada Masterka, Qoraalka PhD ama waxaad noogu soo qori kartaa qoraalkaaga.
Si aad u isticmaali karto Bachelor, Master-ka ama taas shahaadada dhameystiran, maadooyinka soo socda waa in la gudbiyaa:
Daraasadihii Dhexe iyo
Waxay ku socotaa iyada oo aan la dhihin adigaa iska leh inaad siiso dhinacyada kala duwan miisaankaaga aad doorbideyso. Iyadoo aan loo eegin dariiqa aad doorato, daraasadahaagu waxay horumarin doonaan fahamkaaga aqooneed ee suugaanta iyo qorista. Waxa kale oo aad adeegsan kartaa cilmiga luqadda si aad u ogaato asalka iyo taariikhda suugaanta. Maxay saameyn ku yeesheen qorayaasha iyo suugaanta? Sidee shaqooyinka loogu fahmi karaa macnaha guud iyo macluumaad noocee ah ayay ka bixiyaan dadka iyo taariikhda? Shuruudo noocee ah ayey tahay inay shaqeeyaan oo qorayaashu ay buuxiyaan si aan loo ilaawin? Sidee ayay shuqullada suugaanta iyo qorayaashu iskaga xidhaan midba midka kale sidee ayay isugu tixraacaan?
Qoraayaasha ghostwriters ee daraasaadka suugaanta ayaa si guul leh u dhammaystiray waaxda barashada suugaanta. Qorayaashayagu waxay qoraan shaqadaada. Heerka aqooneed ee qoraaladeenna ghostwriters-ka ayaa maraya shahaadada Masterka, Qoraal oder Maqalka mashquulin. Ardaydu markaa waxay si xirfad leh ugu shaqeyn karaan dugsiga shahaadada bachelor iyo shaqo kale oo cilmiyaysan. Qorayaashayagu waxay ku muujiyeen imtixaanadooda intii ay ku guda jireen waxbarashadooda inay aad ugu wanaagsan yihiin barashada suugaanta. Waxaad ku qalin jabisay shahaado sare. Qorayaasheennu aad bay mashquul u yihiin sidaa darteedna waxay ku jiraan xaaladda cilmi baarista ee hadda ku saabsan mowduucyada hadda laga hadlayo. Waa inaad ka faa'iideysataa tan oo aan qornaa shaqadaada. Qorayaasheennu waxay leeyihiin waayo-aragnimo aad u dheer aqoontaanna waxay ku gaari karaan waxyaabo badan oo aan adiga lagaa fikiri karin waqti gaaban. La xiriir Kaliya noo soo dir a Mail oder phone. Waxaan diiwaangelineynaa hawshaada oo aan si toos ah ugu galnaa dalab. Hadda nala soo xiriir oo dalbo taada shahaadada Masterka oder Maqalka. Waxaad sidoo kale noo soo diri kartaa a dib u xusuusasho si loo hagaajiyo Kadib waxaan kuu soo wici doonnaa waqti adiga kugu habboon. Qorayaashayadu way ku faraxsan yihiin inay kaa caawiyaan abuurista iyo su'aalahaaga. Shaqada tacliimeed, waa inaad kireysataa hay'addeena qorista qoraaga.
Qorayaasheennu waxay ku faraxsan yihiin inay qoraan shaqadaada cilmiyeed. Si aad u hesho darajo wanaagsan, waa inaad caawimaad raadsataa. Sababtoo ah hawlo badan oo hordhac ah waa in la qabtaa si loo soo gudbiyo shaqo cilmiyaysan oo wanaagsan. Waa inaad si joogto ah uga shaqeysaa, adigoon hakad weyn gelin, haddii kale qoraa si dhakhso leh ayuu uga bixi doonaa mowduuca. Adeegsiga adeegyadeenu wuxuu ku siinayaa xorriyad badan. Sidoo kale waa inaad ku tiirsanaataa talooyinka qoraaga ghost ee tayada qoraalkaaga ee ku saabsan daraasaddaada tacliimeed.
unsere Qorayaashu waxay leeyihiin waayo-aragnimo sannado badan ah oo ku saabsan aaggooda cilmi-baarista oo aad haysato shahaado maadadaada ah. Kama baran kartid aqoontaan dhowr toddobaad inta lagu guda jiro waxbarashadaada. Der Bachelor iyo Maqalka waxaa lagu gaari karaa oo kaliya dadaal badan. Markaad qalin jabiso waxaa jira ikhtiyaarro badan oo aad adigu awoodid oo kale sayniska tacliinta sii wad inaad xirfad yeelato awooddo.
Shaqadaada, waa inaad hubisaa in qaabeynta ay nadiif tahay oo waxa ku jira ay sax yihiin, calaamadaha xarakaynta, higgaadinta iyo naxwaha. Hordhacaada iyo dhamaadka shaqadu aad ayey muhiim u yihiin, maadaama barafasooryadu inta badan toosiyaan mowduucyadan bilowga. Qorayaasha guuleysta waxay qoraan hordhaca kaliya markay dhammeeyaan qeybta fikradda oo ay dejiyaan dhibaatada iyo ujeeddada shaqada. Hordhaca shaqadaada waa inuu u akhriyaa si habsami leh. Culimada suugaanta ee wakaaladeena aad ayey ugufiicanyihiin arintan. Waxaad diirada saaraysaa maadooyinka waxaadna qortay waraaqo cilmiyaysan.
Qoraalka ghost ee daraasaadka suugaanta
Qorayaasheenna qormooyinkeennu waxay leeyihiin khibrad sannado badan ah oo ku saabsan barashada suugaanta waxayna horeba uga qoreen shaqooyin badan aaggan. Kama baran kartid aqoontan toddobaadyo gudahood. Qorayaashayaga cirfiidka ayaa kaa caawin doona kaaga Shaqada guriga, Warqad aqoon kororsi ah, shahaadada bachelor, shahaadada Masterka, Qoraal oder Qoraalka PhD qiimo jaban. Qiimaheena hoose ee ghostwriting wuxuu ku siinayaa xoriyada mashaariicdaada kale ama imtixaanadaada inta aad wax baraneyso.
Daraasaadka Suugaanta ee Cilmi-baarista
Ka dib markaad si guul leh u dhammaysato barashadaada suugaanta, waad samayn kartaa Maqalka ku dhowaad, hel dhakhtar, oo sii wad cilmi baarista sayniska. Wadadani waxay ku siinaysaa fursad aad ku horumariso maadooyin dheeraad ah oo xiiso leh ama aad khabiir buuxda kaga noqoto maadadaada.
Ma rabtaa xirfad ka fog jaamacadda? Halkan, sidoo kale, waxaad leedahay fursado badan. Waxaad uga shaqeyn kartaa tifaftire joornaalada kala duwan iyo joornaalada, iyo sidoo kale wargeysyo caan ah. Sidoo kale waa suurtogal in loo shaqeeyo sidii tifaftire madaxbanaan ama shaqaale madbacad. Marka waad ka qaybqaadan kartaa abuurista berito kuwa ugu fiican. Mise waxaad jeceshahay inaad qorto kuwan iibka ah adigu adigu? Tani sidoo kale waa suurtagal shahaadadan. Waxaad sidoo kale u adeegsan kartaa xirfadahaaga turjumaan ahaan shirkadaha. Haddii aad rabto, waxaad sidoo kale ku biiri kartaa shirkadaha ganacsiga. Aqoonyahanada suugaanta waxay keensadaan xirfado badan oo iyagana halkan looga baahan yahay. Xirfadaha aqoonyahanada suugaanta waa la qiimeeyaa oo la horumariyaa, gaar ahaan barnaamijyada softiweerka iyo horumarinta ciyaaraha.
Daraasadaha suugaanta ee nolosha xirfadeed
Si loo awoodo in la doorto waddooyinkan xirfadeed, buundooyinka fasalka koowaad waa lagama maarmaan. Maaddaama aan ognahay cadaadiska ardayda inta badan ay ku hoos jiraan, waxaan ku faraxsanahay inaan kaa caawinno diyaarinta waraaqaha ereyga tacliinta, teesarrada bachelorka ama waraaqaha kale ee sayniska. Qorayaashayadu waxay leeyihiin darajo tacliimeed oo ku saabsan goobahooda waxayna dib u milicsan karaan khibrado kala duwan. Dhamaan qorayaashayagu waxay u shaqeeyaan si feejigan waxayna inta badan qoreen waraaqo cilmiyaysan. Tan macnaheedu waxa weeye inaad isla taqaanid qaabaynta iyo jaangooyooyinka saxda ah ee maadada lafteeda Dabcan, dhammaan shaqadeena waxaa lagu soo rogay baaritaanka xatooyada waxaana loola dhaqmayaa si sir ah oo adag. Qorayaashayaga ghostwriters waxay kaa caawinayaan waqtigaaga warqad, warqad aqoon isweydaarsi, shahaadada koowaad ee shahaadada koowaad, shahaadada mastarka, shahaadada diblooma ama shahaadada dhakhtar qiimo macquul ah oo la awoodi karo. Xaaladaheena ugu sareeya waxay ku siinayaan xorriyadda aad ugu baahan tahay mashaariicda kale iyo imtixaannadaada inta lagu jiro waxbarashadaada.
Maaddaama aad tahay aqoonyahan suugaaneed waxaad u shaqeysaa, tusaale ahaan, tifaftire ahaan, akhrine iyo turjumaanba sidaasna waxaad xirfadahaaga ugu keeni kartaa shirkadda. Waxaad ka samayn doontaa wax ka mid ah! Waan ku caawin doonaa erfolg si loo dhammaystiro!
Qeybta barashada suugaanta ee shirkadaha ganacsiga
Tusaale ahaan, aqoonyahanada suugaanta waxay gali karaan ganacsi waxayna la imaan karaan xirfadahooda shirkadaada. Aqoonyahanada suugaanta ayaa sidoo kale dalbanaya dhanka horumarinta softiweerka. Si aad ugu qanciso meherad ganacsi dhibco wanaagsan, waa inaad ka faa'iideysataa talooyinkayaga. Kaliya halkan Kontakt nala soo duub. Waxaan kuu xallinaynaa dhibaatadaada!
Hubinta tayada ee barashada suugaanta
MRS ANNE BUTEICA